Kungenzeka yini ukuthola ama-backlink kusuka kumawebhusayithi we-PR10?
Mhlawumbe kuzwakala kuhle kakhulu ukuba yiqiniso. Noma kunjalo, konke kuyiqiniso uma unendlela ehlakaniphile yenkinga. Udinga ukuqaphela ukuthi kunamathuba amaningi ukuthola ama-backlink angu-PR 10 nsuku zonke - white beach floppy hat. Konke okudingayo ukugcina amehlo akho nezindlebe zivulekile njalo ziqhubeka nokubuka amathuba amasha wokuxhumanisa. Kunengqondo ukuzama amasu wokwakha amaxhumanisi asebenzayo kunokubhula izivakashi noma izixhumanisi zokubeka amazwana ukuze uthole izixhumanisi eziphezulu ze-PR ezifakiwe.
Ake sixoxe ngezindlela ezingenzeka zokuthola i-backlinks ye-PR10. Abanye abaphathi bewebhu bavame ukukholelwa ukuthi indlela eyedwa yokuthola izixhumanisi eziphezulu ezivelele ukukhiqiza okuqukethwe okumnandi. Uma okuqukethwe kwakho kuyasiza, uzothola ikhwalithi ye-organic links yangaphandle. Noma kunjalo, akusikho iqiniso. Izosebenza ekugcineni, kodwa ngubani onokude lokho ukulinda. Enye indlela evamile yokwakha i-backlink ye-PR10 ukudala okuqukethwe okukhulu futhi wenze umkhankaso wokufinyelela ngaphakathi kwe-niche yakho yemakethe ukucela abanikazi bewebhu nababhulogi ukuxhuma kuwe.
Nokho, zombili lezi zindlela zokwakha izixhumanisi aziphumeleli empeleni. Okokuqala, akulula ukudala okuqukethwe okufisa ukuhlinzeka abasebenzisi ngolwazi abangazange bazwe ngaphambili. Kuthatha isikhathi esiningi nemizamo yokwenza into enjalo yekhwalithi yekhwalithi. Enye inkinga lapho okuqukethwe kwakho kungaxhunyiwe khona. Kulesi simo, ungathembela emithonjeni yewebhu ephakathi noma ephansi. I-Outreach ayisebenzi kulezo zimo. Ngaphezu kwalokho, abathonya abacatshangwayo bathola izicelo eziningi zokwakha izixhumanisi nsuku zonke. Ezimweni eziningi, bavele beqa izicelo zakho ngaphandle kokufunda okuqukethwe kwakho.
Isixazululo esiphelele futhi, ngendlela, impilo yami yokuphila, ukukwenza konke ngokwakho ngaphandle kokuthembela kwabanye. Ake sihlolisise ukuthi isebenza kanjani.
Yakha ama-backlink akho
Angase azwakale ahlaziyekile, kodwa ungakha ama-backlink akho eminye imithombo ye-PR ephezulu. Isibonelo, nginesithakazelo kumithombo ye-PR 10 yewebhu njengo-Google, i-Reddit, i-Facebook, i-LinkedIn, i-YouTube, nabanye. Lezi siteshi zizokuvumela ukuba udale eyakho imfanelo ephezulu, efanelekile emuva futhi uthuthukise isayithi lakho lesayithi. Awukwazi nje ukubeka isixhumanisi sakho kulezi zesikhulumi sewebhu ezithandwayo. Udinga ukwakha okulungile, okuphezulu, nokufaneleka okukhona kwenye yalezi zingosi bese ushiya emuva ngemuva kwakho. Udinga ukudala iphrofayili enhle bese uyigcwalisa ngolwazi olufanele kakhulu. Umsebenzi wakho oyinhloko kukhona ukukhiqiza okuningi okuqukethwe okuhambisana nesixhumanisi sakho. Ngokwenza kanjalo, uzokwenza isixhumanisi sakho sibe namandla futhi sikhulume.
Esigabeni esilandelayo, udinga ukudala izixhumanisi phakathi kwayo yonke imithombo yewebhu lapho ikhasi lakho likhona khona. Ngokwesibonelo, uma ushicilela okuthunyelwe okusha ku-Facebook, kuzomele uxhumane nayo kusuka ku-LinkedIn, Instagram, Pinterest, Twitter, namanye ama-akhawunti. Futhi vesi ivesi, ukuze wonke amakhasi ngokwabo abe backlinks. Ngenxa yalokho, uzothola ama-backlink ama-PR 10 kakhulu ngemizamo yakho ngaphandle kokuchitha noma yimaphi ama-cent.